Ọkachamara Semalt: Ụzọ ndị dị egwu iji chebe saịtị si n'aka ndị na-agba ọsọ
Ọtụtụ ndị na-eche na ebe nrụọrụ weebụ ha enweghị ihe ọ bụla dị mkpa ka ha wee bụrụ hacked. A weebụsaịtị nwere ike ịbụnke onye na-eji ihe eji egwu egwu eme ihe site n'iji ihe nkesa na-ebufe spam ma ọ bụ jiri ya dị ka ihe nkesa na-adịru nwa oge iji kwado faịlụ na-akwadoghị. Hackers lekwasịrị mkpokọtasava na bitcoins m, na-eme ka botnets ma ọ bụ ịchọ maka ransomware. Ndị na-agba ọsọ na-eji akwụkwọ edemede akpaghị aka iji mebie ịntanetịna-eme ihe n'ụzọ dị mfe na ngwanro.
N'okpuru ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ nke Igor Gamanenko kwadoro, nke Ọkachamara Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa, iji chekwaa gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Software na-adị ugbu a
Kwesịrị imelite ngwanrọ arụmọrụ na ihe ọ bụla na-akwado ngwa ngwa.Ngwunye ọ bụla na ngwanrọ ahụ na-enye ndị na-agba ọsọ ọsọ mfe iji aka ha gosipụta ma gosipụta ọchịchọ ha. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ahazigị na ebe nrụọrụ weebụ gị, mgbe ahụ ị nweghị ihe ọ bụla ị ga-echegbu onwe ya dịka onye ọrụ ụlọ ọrụ kwesịrị ilekọta nchekwa weebụ. Ngwa niile nke atọ kwesịrị ịbụemetụgharị mgbe niile iji tinye ogige nchedo ọhụrụ.
Ndị omekome na-eji mgbochi ịwa aka iji nweta nchekwa data weebụ. Iji ọkọlọtọTransact SQL na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'amaghị ama itinye koodu Koodu n'ime ajụjụ nke a ga-eji mee ihe iji chekwaa tebụl ma ọ bụ hichapụ data. Ijizere nke a, jụọ ajụjụ ndị dị mkpa dị ka nke a dị n'okpuru:
$ stmt = $ pdo-> kwadebe ('Họrọ + FROM na tebụl EBERE na kọlụm =: uru');
$ stmt-> mebie (nkeji ('uru' => $ parameter));
Akwụkwọ edemede site na peeji nke 17
Ozi ezighị ezi
Onye nchịkwa nke ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịkpachara anya maka ozi egosipụta na gịozi njehie. Naanị nyefee ndị ọrụ gị na-ezighi ezi, iji jide n'aka na ha anaghị enye ihe nzuzo nzuzo na sava gị dị kaokwuntughe ma ọ bụ igodo API.
Ọ dị oké mkpa iji okwuntughe dị mgbagwoju anya iji nweta sava gị ma ọ bụngalaba ntanetị weebụ. E kwesịkwara ịgba ndị ọrụ ume iji okwuntughe siri ike iji nweta akaụntụ ha. Nchikota nke uppercase,obere, nọmba na ihe odide pụrụ iche mejupụtara paswọọdụ echedoro. E kwesịrị ịchekwa okwuntughe site na iji algorithm na-egbuke egbuke. WeebụEnwere ike ịmekwu nchedo site na iji nnu ọhụrụ na nke pụrụ iche na paswọọdụ.
Iji gbochie mgbalị hacking, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji zere ịnweta ịnweta uploadedfaịlụ. A ga-echekwa faịlụ ọ bụla e bipụtara na ebe nrụọrụ weebụ gị na nchekwa dị iche na mpụga Webroot. Ihe odide dị iche iche kwesịrị ịbụwepụtara iji zipu faịlụ site na folda onwe ya ma nye ha ha na ihe nchọgharị ahụ.
Ọ bụ usoro iwu, nke na-enye nchekwa na weebụ. Ọ na-eme ka ndị ọrụ jide n'aka naha na-enweta ihe nkesa ha na-atụ anya nakwa na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike igbochi ọdịnaya ha na-ebugharị. Ebe nrụọrụ weebụ na-akwado ikwenyekaadị ma ọ bụ ụdị ịkwụ ụgwọ ọzọ ga-eji kuki kuki zitere na arịrịọ ọ bụla. Nke a na-enyere aka nyochaa arịrịọ ndị a na-emechiọgụ mpụ.
Jiri ngwa nchedo weebụ
Ozugbo i mechara ihe niile dị n'elu, nyochaa nchekwa weebụ gịdị oké mkpa. Ọ kachasị mma site na iji ngwa ntinye ule, nke gụnyere Netsparker, OpenVAS, Nche Headers.io na Xenotix XSSOjiji Ojiji. Nsonaazụ nke iji ngwaọrụ ndị nwere nnukwu nchegbu nwere ike ịchọta Source .